चीन हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका निर्माता र आपूर्तिकर्ता - JTL धातु
Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादनहरु कारखाना एक पेशेवर निर्माता र पालतू हाइड्रोलिक सौंदर्य टेबल र चीन मा कुकुर बक्से को आपूर्तिकर्ता हो। हामी घरपालुवा जनावर उत्पादनहरु, स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरु र अन्य धातु products.Our कम्पनी को उत्पादन मा विशेषज्ञता को अनुभव र टेक्नोलोजी को धेरै बर्षहरु छन्, स्वतन्त्र रूपमा हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिकाहरु को रूप मा उत्पादनहरु उत्पादन, त्यसैले यो लोकप्रिय छ। हाम्रो उत्पादनहरु यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, जापान र अन्य विदेशी customers.We मा विदेशी ग्राहकहरु लाई निर्यात गरीन्छ। हामी गुणस्तरीयता, नैतिकता र service.Our कम्पनी को उद्योग एक्सपोजर को7बर्ष संग अनुभवी पेशेवरहरु को एक टीम को एक प्रतिष्ठा को आनन्द लिन्छौं।
किन हाम्रो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका छनौट? हाइड्रोलिक ग्रूमिंग डेस्कटप गैर पर्ची हो, टेबल स्थिर र बलियो छ, र यो हिलाउने छैन। र हाम्रो हाइड्रोलिक सौन्दर्य तालिका कुकुर को उचाई अनुसार समायोजित गर्न सकिन्छ।
हाम्रो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका उत्तम कारीगरी, स्थापना गर्न सजिलो छ। तालिका को उठाने हाइड्रोलिक खुट्टा पेडल द्वारा नियन्त्रण गरीन्छ। टेबल शीर्ष एक गैर पर्ची टिकाऊ MDF प्यानल हो। सबै चार feets टेबल को स्थिरता बढाउन को लागी, गैर पर्ची हो, र हाम्रो टेबल मुख्य रूप मा घर भित्र प्रयोग गरीन्छ।
भारी शुल्क ४२.५ "कालो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका
Groomers सुरक्षित रूप मा र भारी क्षेत्र ४२.५ "कालो हाइड्रोलिक ग्रूमिंग टेबल संग ग्रुमि area क्षेत्र को बाहिर जानवर सार्न सक्नुहुन्छ। Youâ â your ll तपाइँको पीठ मा दुखाइ कम गर्न को लागी र घरपालुवा जनावरहरु लाई यो हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली संग सुरक्षित छ कि तालिका मा उचाई मा 21 इन्च बाट अधिकतम 36 इन्च सम्म उठाउँछ। तपाइँ टेबल को उचाई कहीं पनी दायरा मा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाइँको लागी सम्भव भएसम्म आरामदायक बनाउन को लागी। तालिका, जुन घरपालुवा जनावरहरु लाई ३३7.५ पाउन्ड सम्म आकार मा उठाउन सक्छ, एक ग्रूमिंग हात र पाश समावेश छ।
हामीलाई छान्नुहोस्, तपाइँको सबैभन्दा विश्वसनीय साथी!
४२.५ '' कालो हाइड्रोलिक ग्रुमिंग टेबल क्लैम्प संग
Groomers सुरक्षित र मा ४२.५ '' कालो हाइड्रोलिक ग्रुमिंग टेबल संग क्लैम्प संग ग्रूमिंग क्षेत्र को जानवरहरु लाई सार्न सक्छन्। Youâ â your ll तपाइँको पीठ मा दुखाइ कम गर्न को लागी र घरपालुवा जनावरहरु लाई यो हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली संग सुरक्षित छ कि तालिका मा उचाई मा 21 इन्च बाट अधिकतम 36 इन्च सम्म उठाउँछ। तपाइँ टेबल को उचाई कहीं पनी दायरा मा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाइँको लागी सम्भव भएसम्म आरामदायक बनाउन को लागी। तालिका, जुन घरपालुवा जनावरहरु लाई ३३7.५ पाउन्ड सम्म आकार मा उठाउन सक्छ, एक ग्रूमिंग हात र पाश समावेश छ।
Groomers सुरक्षित रूप मा जान्छ र 42.5 "कालो हाइड्रोलिक ग्रूमिंग टेबल को साथ नुहाउने संग ग्रूमिंग क्षेत्र को बाहिर जान सक्नुहुन्छ। Youâ â your back ll तपाइँको पीठ मा दुखाइ कम गर्न र जनावर सुरक्षित यस हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली संग तालिका मा उचाई मा ३१ इन्च को एक अधिकतम २१ इन्च बाट टेबल उठाउने संग राख्न। तपाइँ टेबल को उचाई कहीं पनी दायरा मा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाइँको लागी सम्भव भएसम्म आरामदायक बनाउन को लागी। तालिका, जुन घरपालुवा जनावरहरु लाई ३३7.५ पाउन्ड सम्म आकार मा उठाउन सक्छ, एक ग्रूमिंग हात र पाश समावेश छ।
त्यसैले संकोच नगर्नुहोस्, मात्र यसलाई किन्नुहोस्!
के तपाइँ अझै पनी नुहाउने बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ, पालतू कुकुरहरु, उपयुक्त उचाई बिना बिरालाहरु को लागी तैयार? यो 42.5 "हात संग कालो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका जेड लिफ्ट फ्रेम संग outfited छ, यो समायोज्य छ। घरपालुवा जनावर मालिकहरु को लागी सजीलै आफ्नो puppies सफाई को लागी राम्रो विकल्प।
यो शक्तिशाली लिफ्ट तालिका groomers 21 र 36 इन्च को बीच मा टेबल को उचाई सेट गर्न को लागी, यो सम्भव को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी आरामदायक बनाउन को लागी अनुमति दिनेछ। तपाइँ पनि पाल्तु जनावर को लगभग कुनै पनि आकार मा काम गर्न सक्नुहुन्छ, शान्त हाइड्रोलिक लिफ्ट संयन्त्र ३३7.५ पाउण्ड सम्म जनावरहरु उठाउन सक्नुहुन्छ। टेबल शीर्ष एक गैर छड़ी रबर कोटिंग संग पीवीसी, जो घरपालुवा जनावर एक गीला सतह मा फिसलन बाट बच्न को लागी अनुमति दिन्छ। त्यसैले संकोच नगर्नुहोस्, मात्र यसलाई किन्नुहोस्!
के तपाइँ अझै पनी नुहाउने बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ, पालतू कुकुरहरु, उपयुक्त उचाई बिना बिरालाहरु को लागी तैयार? यो 42.5 "पेशेवर भारी शुल्क हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका जेड लिफ्ट फ्रेम संग outfited छ, यो समायोज्य छ। घरपालुवा जनावर मालिकहरु को लागी सजीलै आफ्नो puppies सफाई को लागी राम्रो विकल्प।
यदि तपाइँ एक घरपालुवा जनावर छ, यो पालतू कपाल ट्रिम गर्न आवश्यक छ, त्यसैले के हामी तपाइँलाई सिफारिश गर्न जाँदैछौं यो समायोज्य उचाई ४२.५ "कालो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका हो। यो हाइड्रोलिक सौंदर्य तालिका उच्च गुणवत्ता इस्पात फ्रेम, MDF बोर्ड र पीवीसी सतह, जो बलियो र टिकाऊ छ बनेको छ।
यो शक्तिशाली लिफ्ट तालिका groomers 21 र 36 इन्च को बीच मा टेबल को उचाई सेट गर्न को लागी, यो सम्भव को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी आरामदायक बनाउन को लागी अनुमति दिनेछ। तपाइँ पनि पाल्तु जनावर को लगभग कुनै पनि आकार मा काम गर्न सक्नुहुन्छ, शान्त हाइड्रोलिक लिफ्ट संयन्त्र ३३7.५ पाउण्ड सम्म जनावरहरु उठाउन सक्नुहुन्छ। टेबल शीर्ष एक गैर छड़ी रबर कोटिंग संग पीवीसी, जो घरपालुवा जनावर एक गीला सतह मा फिसलन बाट बच्न को लागी अनुमति दिन्छ।
एक पेशेवर चीन हाइड्रोलिक ग्रूमिंग टेबल निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, यदि म थोक गर्न चाहन्छु, तपाइँ मलाई के मूल्य दिनुहुन्छ? यदि तपाइँको थोक मात्रा ठूलो छ, हामी कारखाना price.You प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरको बिक्री र हामी बाट चीन मा बनेको उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु लाई आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य! हाम्रो उद्धरण कम छ। छुट किन्नको लागी स्वागत छ हाइड्रोलिक ग्रूमिंग टेबल। अधिक जानकारी को लागी, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।